April 2016 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Viber viber ဆိုင်ရာ
Unknown at 2:02:00 PM 1
Anonymous at 2:00:00 PM 0
မိမိတို့၏ နေအိမ်၊ အိပ်ခန်း၊ ရုံးခန်း၊ အလုပ်နေရာ စသည်တို့မှာ
ခြင်ရှိနေပြီး ဓါတုဗေဒနည်းပညာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်
ဆေးများကို အသုံးပြုလျှင် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်၍
ဘေးကင်းသည့် သဘာဝနည်းများဖြင့် ခြင်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆေးနည်းတောင်းဆိုလာသူများအတွက် ကျန်းမာရေးသတင်းများမှ သဘာဝဆေးနည်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
၁။ ကြက်သွန်ဖြူတစ်မွှာကို ထု၍ ပြုတ်လိုက်ပါ။ ထိုကြက်သွန်ဖြူပြုတ်ရည်ကို ဗူးထဲထည့်၍ အိမ်ထဲ ဖြန်းထားလျှင် စူးရှသော ကြက်သွန်အနှံ့ ကြောင့် ခြင်မလာတော့ပါ။
၂။ စပါးလင်အဆီဖြင့် မီးထွန်းထားပါ။ ၄င်းအနှံ့ကို ခြင်များကြောက်ပါသည်။ ခြင်ကိုက်နေသည့်နေရာများကို စပါးလင်အဆီကို လိမ်းပေးလျှင် ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၃။ ယူကလစ်နှင့် သံပရာဆီကို ဆတူရောစပ်၍ ခြေ၊ လက်တို့ကို လိမ်းပေးပါ။ ခြင်လုံးဝ မကိုက်တော့ပါ။ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ မပါဝင်သည့်အတွက် ဘေးဥပါဒ်လုံးဝမဖြစ်ပါ။
၄။ တမာဆီနှင့် အုန်းဆီကို ဆတူရောစပ်၍ မိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို လိမ်းထားပါက ၄င်းအနံ့မပြယ်မခြင်း ခြင်လုံးဝ မကိုက်တော့ပါ။ ၄င်းအနံ့များသည် အနည်းဆုံး (၆) နာရီကြာအောင် ခံနိုင်ပါသည်။
၅။ Tea tree oil လို့ခေါ်တဲ့ လက်ဖက်ပင်၏ အဆီကို အခန်းထဲ ဖျန်းထားလျှင် ခြင်မလာတော့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကိုလည်း ၄င်းအဆီကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၆။ Lavender (လာဗင်ဒါ) အပင်ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ခြင်လုံးဝ မရှိပါဘူးတဲ့။ ၄င်းအနံ့ကို ခြင်တွေ မခံနိုင်ပါဘူး။ လာဗင်ဒါ အဆီကို လိမ်းပေး၊ ဖျန်းပေးလျှင် ခြင်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ လေးညှင်းအနံ့ကို ခြင်တွေ ကြောက်ပါတယ်။ သံပုရာသီးတစ်လုံးကို အကွင်းလိုက် ၄ ကွင်းရအောင် လှီးလိုက်ပါ။ အစေ့များကို ဖယ်ထုတ်ပြီး လေးညှင်းပွင့်များကို သံပုရာကွင်းပေါ်စိုက်ထားပါ။ သံပုရာ ၈ ကွင်း(၂ လုံးစာ)ကို ပန်းကန်ပြားတို့လို အပြားတစ်ခုခုပေါ်တင်ထားပြီး ခြင်များတဲ့နေရာမှာ ချထားပါ။
( လိုအပ်သော အဆီများကို ယခုအခါတွင် ကုန်တိုက်၊ City Mark တို့လို ဆိုင်များတွင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ကြပါသည် )
Anonymous at 1:05:00 PM 0
လူသားတွေဟာ မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီနဲ့ အသက်ရှင်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ။ တစ်နေ့ကျရင် ဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီကြပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါးရဲ့ ဘဝတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေခံစိတ်ကတော့ "မျှော်လင့်ခြင်း" ဆိုတဲ့ စိတ်လေးပါပဲ။ အဲဒီ့စိတ်ကြောင့် လူသုံးမျိုးကွဲသွားတယ်။ ပထမလူက မျှော်လင့်ချက်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပြီး ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်အောင်သွားတယ်။ ဒုတိယ လူကတော့ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်အဆင့်မှာတင် စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်တယ်။ တတိယလူကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မဲ့သွားပြီး လမ်းတွေပျောက်ကုန်တယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်တဲ့သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို အရောင်တောက်အောင်လုပ်ရင်း အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျရှုံးတဲ့သူတွေကလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးပြီး အရှုံးတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းတွေမှာပါ သက်ရောက်မှုရှိသွားပါတယ်။
ထိပ်တန်းထိ အောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းဟာ "မဖြစ်နိုင်ပါဘူး" ဆိုတဲ့ စကားသံတွေကြားကနေ "ဖြစ်နိုင်ပါတယ်"
ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကတစ်ဆင့် ယုံကြည်ချက်တွေကို အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့
"မဖြစ်နိုင်ပါဘူး" ဆိုတဲ့ စကားသံတွေကို ယုံမလား? သင့်ရဲ့ "မျှော်လင့်ချက်" တွေကို ယုံမလား? သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကရော? ဘာဖြစ်မလဲ? သင်ကရော မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ယုံကြည်ချက်တွေအဖြစ် အသက်သွင်းနေတဲ့သူလား? မျှော်လင့်ချက်တွေမဲ့ပြီး လမ်းပျောက်နေတဲ့သူလား?
ကဲ.. မျှော်လင့်ချက်တွေကို အသက်သွင်းကြရအောင်ဗျာ..
ရွှေညာမောင် (Focus Youth) , focusyouthmyanmar
Windows 10 Pro Update April 2016 Full Key [ 32 bit-64 bit]
Ko Lin at 1:34:00 AM 0
Windows 10 သုံးစွဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် April မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့
Windows 10 Pro ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
[ 32 bit-64 bit] တွေကို သီးသန့် အောက်မှာ ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။
မိမိ နှစ်သက်ရာ bit တွေကို စိတ်တိုင်ကျ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Title : Windows 10 Pro Update April 2016 Full Key
Version : 1511 Update April 2016 en-US
Packed by: Generation2
Size : 3.6 GB / 4.1 GB
Windows 10 Pro Update April 2016 Full Key 32 bit
Google Drive | Userscloud |
Windows 10 Pro Update April 2016 Full Key 64 bit
Windows 10 Pro Update April 2016 Activation key
Ko Lin at 1:32:00 AM 0
Video Editing လုပ်ရာတွင် တော်တော်ကောင်းပြီး ရုပ်သံအကြည်ကို လုံးဝပြုနိုင်တဲ့ Editing Software ဆိုတာကို Sony Vegas Pro ကို သုံးဖူးကြသူတိုင်း သိပြီးသာပါ။
ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေ နဲ့ သီချင်းတွေ ကို ဖန်တီး ရာတွင်လည်း များပြားလှသော Effect မျိုးစုံ နဲ့Professional ကျကျ အသုံးပြု နိုင်ပြီး Videos တွေကို တည်းဖြတ်ရာတွင် လိုသလို ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း ပြန်လည်အစားထိုးခြင်း ၊ အလင်းအမှောင် ချိန်ညှိခြင်း ၊ အလှစာတန်း ထည့်ခြင်း ၊ ကာလာအိုကေ စာတန်းထိုး အလွယ်ဆုံး ပြုနိုင်ခြင်း၊ 3D video ဖန်တီးခြင်း ၊ Effect အမျိုးမျိုး နဲ့သက်ရောက်မှု ကူးပြောင်းခြင်း စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အမျိုးမျိုး ကို လိုသလို အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် စီပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ နဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေ မှာ Edition လုပ်ရာတွင် အဓိက အသုံးပြုကြတဲ့Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ...။
Keygen ( Patch )ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Windows XP / Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32-bit or 64-bit) အားလုံးမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး
Ko Lin at 1:30:00 AM 0
Windows 10 ကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တစ်ခွေတည်းနှင့်
Windows 10 ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Windows 10 All in One ! ခွေလေးပါဗျာ။
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများနှင့် Windows 10 ချစ်သူများအတွက် အောက်မှာ လင့်မသေခင်
Google Drive | Userscloud | Tusfiles | Torrent
Windows7SP1 Update 2016 x86-x64 16in1 Full Activated (4.4 GB)
Ko Lin at 1:28:00 AM 0
Windows7ချစ်သူများအတွက် 2016 ခုနှစ်မှာ ထွက်လာခဲ့တဲ့
Windows7All in One ခွေလေးပါဗျာ။ Activated လုပ်ပြီးသာမို့
စိတ်ချ စွာ သုံးစွဲ့နိုင်ပါတယ်။
Windows7ချစ်သူများအတွက် ဒေါင်းသွားဘို့ မမေ့ကြနဲ့နော်။
Title : Windows7SP1 Update April 2016 Full Activated
Version : Update until 12.04.2016
Repacked by: Generation2
Format : .ISO / Size : 4.4 GB
Windows7SP1 Update March 2016 x86-x64 16in1 Full Activated (4.4 GB)
Google Drive | Userscloud | Tusfiles | Uptobox
အောင်မြင်မှုကို မရှာဖွေဘဲ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို မတွေ့နိင်ပါဘူး။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုလည်း မရှာဖွေဘဲ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုလည်း မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဘဝကို အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်မနေဘဲလည်း ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို မသိနိုင်ပါဘူး။
လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပဲ ကိုယ်ရမယ်။
ကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အခါ အချိန်တန်တဲ့အခါ ကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်လည်း အချိန်ကျလာတဲ့အခါ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
ကြမ်းပြင်ကို စိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ သက်တန့်ကို မတွေ့နိုင်ပါဘူး။
ကောင်းကင်ကြီးကို ငေးပြီးတော့လည်း မြက်ပင်စိမ်းတွေကို မမြင်နိုင်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲလို့ သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲ စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ အောင်မြင်မှုတွေရှိတဲ့လမ်းကို လျှောက်ပြီး၊ အောင်မြင်နိုင်မယ့်အရာတွေအတွက် ကြိုးပမ်းရုံပါပဲ။
ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတံခါးကို ဖွင့်ထားပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေကို လက်ခံကြိုဆိုရုံပါပဲ။
Messenger ဟာ Facebook Application အတွင်းမှာ မဟုတ်တော့ပဲ၊ သီးခြား Application တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေ တာကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာသည် နှင့် အမျှ Messenger Application ဟာ ပိုမို လူသုံးများ နာမည် ကြီးလာခဲ့ကာ Facebook မှ ဝယ်ယူခဲ့သည့် နာမည် ကြီး Apps တစ်ခုဖြစ်တဲ့ WhatsApp နှင့်ပါ ယှဉ်ပြိုင်လာ နုိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ သုို့သော် Messenger နှင့်ပတ်သတ်ပြီး Battery ပိုကုန်ခြင်း၊ RAM ပိုစားခြင်း စ သည့် ပြဿနာ များကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမို ကြုံတွေ့လာနေရပါတယ်။
Facebook Messenger Application ဟာ အခြား Application များထက် သိသိသာသာကို Battery ကော၊ RAM ပါ ပိုအသုံးပြုပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Facebook ဟာ notification များနှင့် update များကို အလျှင်အမြန် သိစေရန် စီစဉ်ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖုန်းလိုင်းမမိ ချိန် များတွင် တောင်မှ ပြောထားပြီးသား Message များကို Messenger ထဲတွင် စိတ်ကြိုက် ပြန်လည်ရှာဖွေနုိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Messenger Application သည် 100MB လောက် Storage ထဲတွင် နေရာယူထားသော Application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Facebook Messenger ကသင့်ဖုန်းမှာ ပြသနာပေးတယ်လို့ ယူဆရင် Facebook Messenger App ကို uninstall လုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ messenger service ကို တစ်ခြား သူတွေတီထွင်ထားတဲ့ application တွေကနေတစ်ဆင့် သုံးလို့ရပါတယ် ။ Metal App ဒါမှ မဟုတ် Tinfoil App စတဲ့ application တွေကနေ Facebook messenger service ကို သုံးလို့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ Application တွေက မူလFacebook Messenger App ထက်စာရင် ဘတ်ထရီစားတာလဲ ပိုသက်သာသလို Ram memory မှာနေရာယူတာလဲပိုသက်သာပါတယ် ။
Metal Facebook app
ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ Facebook Messenger ကို ဖုန်း Browser မှပြန်ဖွင့်ကာ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖုန်း၏ Storage ကိုပို ထွက်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Message မထွက်ခြင်းနှင့် လက်ခံ၍ မရခြင်းပြဿနာ
တစ်ခါတစ်လေ Messenger မှ ကိုယ်ပို့သော Message များမထွက်ခြင်းဖြစ်တတ်သလို၊ အခြားသူမှ မိမိ ကိုယ်ပို့သော Message များ မဝင်ခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Sticker များ အပြန်အလှန်ပို့ရာတွင် Message မထွက်လည်းမထွက်တော့သလို၊ အဝင်လည်း လက်ခံလို့မရတော့ပါဘူး။ ထိုပြဿနာ ၏ အဓိက အကြောင်းအရာမှာ Messenger Up to Date မဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းကဲ့သုို့ ကြုံတွေ့လာရပါက Play Store (သို့) အခြား Store တစ်ခုခုမှ နေပြီး Messenger App ကို Update ပြုလုပ်လုိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနို်င် ပါသည်။
Message များ အလို လျောက်ပျက်သွားခြင်း
သင့် Messenger Apps ထဲမှ Message များမှာ အလိုလျောက် ပျောက်သွားခြင်း၊ archive ဖြစ်သွားခြင်း စသည့်တို့ တစ်ခါတစ်လေတွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထိုအခါ ပြန်လည် ရှာဖွေလိုပါက Facebook ကို Browser တွင် Sign-In လုပ်ကာ Message Tab သုို့ဝင်ပြီး See All>More>Archived ကို နှိပ်ကာ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Messenger ကိုဖွင့်လုိုက်စဉ်တွင် ဘာမှမပေါ်လာပဲ၊ အမဲရောင် Screen သာပေါ်လာပြီး crash ဖြစ်သွားခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) Unfortunately Facebook Messenger has stopped စသည့် Dialog box များ ပေါ်လာပါက
ပထမဦးစွာ မိမိ Android OS Version Up-to-Date ဖြစ်မဖြစ်ကို စစ်ပါ။ ၄င်းကို Setting>About Device>Software Update> Update now တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနုိုင်ပါသည်။ ထိုသုို Update ပြုလုပ်ရန် အတွက် Wifi တစ်ခုခုနှင် ချိတ်ဆက်ထားရန် လိုအပ်ပြီး၊ Battery အား အနည်းဆုံး ၅၀ ခန့်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက် Setting > Application > Application Manager > All > Messenger ထဲသို့ဝင်ကာ Clear Cache ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနုိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် မိမိ Messenger App ကိုလည်း Latest Version ဖြစ်အောင် Download ပြုလုပ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝ ပြန်မပွင့်လာပါက Setting ထဲဝင်ကာ Reinstall ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသေးသည်။
Mi5 သည် Xiaomi ၏ နောက်ဆုံးထုတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းနှင့် Specification အသင့်တင့် အမျှတဆုံး ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ထဲက အမြင့်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ Mi5 Pro ကို ဘာကြောင့် ဝယ်သုံးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်များကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Processor အနေနဲ့ Qualcomm ၏ Snapdragon 820 processor ကို အသုံးပြုထားပြီး on-board RAM 4GB အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ Internal Storage အနေနှင့်လည်း 128GB အထိပါဝင်တာကြောင့် Android ဖုန်းများတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော Memory မလောက်သည့် ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၄င်း Specification များမှာ Android စနစ်သုံးဖုန်းများတွင် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော ဖုန်း တစ်ခု ရပ်တည်နေနုိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ပါဝင်သော Specification များမှာလည်း အတော်အတန် မဟုတ်ပေ။ Battery အနေနှင့် 3,000mAh ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ရုပ်ထွက် 1.920 x 1,280 ထိ ရုပ်ထွက်ရှိသော 5.15 လက်မအရွယ် HD Display ပါဝင် ပါသေးသည်။ ရှေ့ Camera အနေနှင့် 16MP(16megapixel) ပါဝင်ပြီး၊ ရှေ့ Camera အနေဖြင့် Selfie ကောင်းကေငာ်း ရုိုက်နုိုင်ရန် လုံလောက်သော 4MP(4megapixel) Camera ပါရှိပါသည်။ Camera Sensor အနေနှင့်လည်း Sony Sensor ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် Mi5Pro Camera ၏ ရုပ်ထွက်မှာ iPhone 6s ၏ ရုပ်ထွက်ထပ်ပင် ပိုမုို ကောင်းမွန်နေမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Android စနစ်အသုံးပြုသော ဖုန်းများမှာ နောက်ပိုင်းတွင် ဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာမှု အမြောက်အမြားရှိလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော် Xiaomi Mi5 မှာ မှု တကယ်ကို သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော ဖုန်းတစ်လုံးကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် Xiaomi Mi5 Pro ၏ Pre-Order ဈေးနှုန်းမှာ $539 မြန်မာငွေ ငါးသိန်းခွဲခန့်သာရှိပြီး ပါဝင်သော Specification များ အားလုံးနီးပါး တူညီသော Smasung Galaxy S7 ထက် ဈေးနှုန်းများစွာ သက်သာတာကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi Mi5 Pro ၏ Pro Edition ကတော့ အလှပ ဆုံး လို့ ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pro Edtion ၏ နောက်ကျောကို Mi Note Pro , Galaxy Note5တို့ကဲ့သို့ ခုံးထားပြီး ပြောင်လက်အောင်ပြုလုပ်ထားပေးတဲ့အတွက် ကောင်းမွန်လှပ တဲ့ Premium Feel ကို ခံစားရစေမှာဖြစ်ပြီး၊ လျှင်မြန်တဲ့ Finger Print System လည်း ပါဝင်တာကြောင့် တကယ်ကို ပြည့်စုံတဲ့ SmartPhone တစ်ခုလို့ တင်စားနုိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်း၏ နောက်ကျောဘက်တွင် Gorilla Glass4ကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ပွန်းရာ ခြစ်ရာ ထင်မည့် အန္တရာယ်မှလည်း ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါသည်။ ဖုန်း Design တစ်ခုလုံးမှာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Anonymous at 10:39:00 AM 0
Maung Pauk at 10:12:00 PM 0
2015-2016 မှာထွက်တဲ့ နာမည်ကြီး Root Tool တွေကို စုစည်းပြီးဖန်တီးထားတာပါ..
Credit : Htet R kar @ New World Mobile
Android Root Collection 2015-2016 v1 : 127.71 Mb
Anonymous at 2:30:00 PM 0
မိမိရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်မှ မှားဖျက်မိသော/ပျောက်ပျက်သွားသော File များကို ပြန်လည် ရယူခြင်း
Anonymous at 8:48:00 AM 1
မှားဖျက်မိသော/ပျောက်ပျက်သွားသော File များကို ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ရေးသည် ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် တကယ့်ကို အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ ဖုန်း ကို Firmware Update လုပ်မိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ reset မှားချမိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရတွေဟာ နှမြောဖို့ကောင်းသလို ပြန်ရဖို့လဲ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍မလွဲသာမရှောင်သာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဆိုပါက မည်သို့ မည်ပုံ ပြန်ယူရမည်ဆိုသည်မှာ တကယ့်ကို ခေါင်းကိုက်စရာ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ၄င်း ပြဿနာများကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးနုိုင်မယ့် Software တစ်ခုကတော့ FonPaw Android Data Recovery Software ပဲဖြစ်ပါတယ်။
FonePaw Android Data Recovery Software သည် သင့် Android ဖုန်းမှ မှားဖျက်မိသော File များနှင့် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ပြန်လည် recover ပြုလုပ်နုိုင်ရန်ကူညီပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ FonePaw Android Data Recovery Software မှာ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ထိထိရောက်ရောက် recover ပြုလုပ်ပေးနုိုင်တဲ့ Software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
FonePaw ဖြင့် recovery ပြုလုပ်နုိုင်တဲ့ File အမျိုးအစာများကတော့ Videos၊ Audios၊ Photos၊ Text Message၊ Contact၊ Call Logs၊ Documents စသည့် တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း Recovery Software သည် Android စနစ် သုံး HTC, Sony, Google, Huawei, Samsung, Motorola, LG, Asus, Acer နှင့် အခြား ဖုန်းများအတွက်ပါ အသုံးပြုနုိုင်သော Software တစ်ခုပါ။
ပထမ ဦးဆုံးအနေနဲ့ FonePaw Android Data Recovery Software ကို Download ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
FonePaw for Window PC ~ https://drive.google.com/open?id=0B1xNA9r4_wcyT0ZzRDFLMURwWG8
FonePaw for MAC ~ https://drive.google.com/open?id=0B1xNA9r4_wcyXzhXVzg0eGN3Yjg
Download ပြုလုပ်ပြီးပါက FonePaw Android Data Recovery Software ကိုဖွင့်ပါ။
ထို့နောက် ဖုန်းမှ USB debugging feature on ကိုထားဖို့အတွက် ဖုန်းရဲ့ Setting —> Developer Option ထဲကနေဝင်ပြီးတော့ USB Debugging ဆိုတဲ့ option ကို on ထားလိုက်ပါ ။ ပြီးလျှင် ကွန်ပြုတာ နှင့် ဖုန်းကို USB ကြိုးဖြင့် ဆက်သွယ်လုိုက်ပါ။
ဖုန်းနှင့် ကွန်ပြုတာချိတ်ဆက်မိသွားပြီဆိုလျှင် ကွန်ပြုတာ Screen ပေါ်တွင် မိမိ recover ပြုလုပ်လိုက်သည့် File အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပေးရန် Option များပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် မိမိ recover ပြုလုပ်လိုသော File များကို ရွေးပေးလိုက်ပြီး Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ software မှနေ၍ သင် recover ပြုလုပ်လိုသော files များကို ဖုန်းပေါ်မှာ scanလုပ် ရှာဖွေပေးနေပါလိမ့်မယ် ။ ၄င်း Scan ဖတ်ခြင်းသည် မိနစ် အနည်းငယ်မျှ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Scan ဖတ်ပြီးသွားပါ၊ သင့်ရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသော Files များကို ပြန်လည်ရယူနုိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါသည်။